Eyona > Hotmail
hlela abafowunelwa kwi-hotmail
Hlela abafowunelwa kwi-hotmail- izisombululo ezinokubakho
Ngaba ndinokudibanisa iiakhawunti ezimbini zeHotmail? I-Oxpress.com ixhasa ukuthunyelwa kwe-imeyile, ukuze ukwazi ukudibanisa i-Outlook.com okanye iidilesi zemeyile ze-Hotmail kunye ngale ndlela. ... Khetha ukuThumela iposi yakho kwenye iakhawunti ye-imeyile kwaye unike idilesi yeakhawunti yakho ephambili ye-Outlook.com. 12 jul. Ngo-2017
yenza i-alias hotmail
Yenza i-alias hotmail-iimpendulo eziqhelekileyo
Kutheni zonke ii-imeyile zam ze-Hotmail zanyamalala? Ngokwesiqhelo, xa i-imeyile ye-Outlook inyamalale, inokuba ngumcimbi woqwalaselo kuseto lwakho, ukungasebenzi kweakhawunti, imigaqo ye-imeyile ebekwe kwi-Outlook, kunye nee-imeyile ezihanjiswe kwifolda esusiweyo. 7 dagen geleden
Useto lomsayino we-hotmail
Useto lomsayino weHotmail- indlela yokufezekisa
Ndingawuseta njani umyalezo ongaphandle kwimbonakalo? Seta impendulo ngokuzenzekelayo Khetha ifayile> Iimpendulo ezizenzekelayo. ... Kwibhokisi yeempendulo ezizenzekelayo, khetha Thumela iimpendulo ezizenzekelayo. ... Kwithebhu yangaphakathi yoMbutho wam, chwetheza impendulo ofuna ukuyithumela kubalingane bakho okanye kwabo usebenza nabo ngelixa ungekho eofisini. ... Khetha Kulungile ukugcina useto lwakho.
Hotmail uphando oluphambili
Uphendlo oluphambili lweHotmail-izisombululo ezinokubakho
Ndifumana njani iakhawunti yam ye-imeyile eshushu? Sayina ungene kwi-Hotmail okanye kwi-Outlook.com Yiya kwiphepha lokungena le-Outlook.com kwaye ukhethe ukungena, faka idilesi ye-imeyile okanye inombolo yefowuni uze ukhethe Okulandelayo kwiphepha elilandelayo, ngenisa igama lokugqitha uze ukhethe ungene.
Ii-imeyile ezishisayo zihambile
Ii-imeyile zeHotmail zihambile-incwadana ebanzi
Kutheni ii-imeyile zam zilahlekile kwi-Hotmail? Ukuba awusebenzisi iakhawunti yakho rhoqo kwaye awunampumelelo yokungena ngonyaka, idatha yakho iyacinywa ngenxa yokungasebenzi. Ukuba usebenzisa iakhawunti yakho rhoqo, ngaphandle kokuphazamiseka, zonke ii-imeyile kufuneka zibekhona. Nceda uzame ukukhetha zonke ii-imeyile ngaphakathi kuluhlu oluthile.